Maxaa ka dhigay Nairobi Caasimada keliya ee Afrika ee maalgashiga Caalamiga ah? | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada
Published: January 7, 2017, 6:18 pm
(0) Comments (Waxay ka mid noqotay Shanta magaalo ee Sida casriga ah u koraya dunida oo dhan)
Magaalada Nairobi, xarunra dalka Kenya waxay noqotay mid ka mid ah shanta magaalo ee ugu sareeya liiska kala horaynta casriyaynta magaalooyinka ku habboon ganacsiga caalamiga ah ee dunida kuwaas oo ay xarumo ku yeelanayaan shirkadihii ugu badnaa ee ganacsi.
Sida ay ku baahisay xarunta daraasadaysa horumarinta magaalooyinka ee Global Cities warbixinteedii sanadkan dhamaaday ee 2016, Magaalada nairobi waxay sidoo kale marin iyo saldhig u noqotay shirkadaha caalamiga ah ee ganacsi iyo kuwa maalgashi ee doonaya inay isku daboolaan guud ahaan Gobolka Bariga afrika.
Nairobi waxay noqotay Magaalada ugu casriyaynta badan xiligan la joogo guud ahaan Qaaradda afrika, iyadoo liiskan caalamiga ah ee ay kaalimaha hore ka gashayna ay ku jiraan magaalooyin ay ka mid tahay Magaalada Dubai ee Dalka isutagga imaaraatka carabta, waxaana soo raaca magaalooyinka kale ee kala ah Kuala Lumpar , Bangkok iyo Moscow.
Warbixinta Global Cities waxay sheegtay in ugu yaraan 1.8 Milion fuudh oo Square oo dhul ah ah laga dhisay oo laga furay xarumo ganacsi oo waaweyn oo casri ah (modern shopping mall space) sanadkii 2015.
Mr James Roberts oo ah dhaqaalayahan ka tirsan xarunta Knight Frank oo arintan magaalada nairobi ka hadlay waxa uu u sheegay shabakada wararka ee EastAfrican in si weyn awoodda loo saaray hirgelinta xarumaha ganacsi ee magaalada Nairobi, waxana isaga oo aintaa ka hadlaya uu yidhi sidan: ‘xiliyadii u dambeeyey oo keliya Dhismayaasha ganacsi waxaa laga hirgeliyey masaafo dhan 980.000 oo fuudh oo Square ah taas oo ka dhigan in waayo aragnimo laga helay qaabkii loo furfuri lahaa Magalaada, waana muuqaal ka turjumaya isbedelada dhaqaale iyo ka bulsho ee ay Kenya ku socoto xiligan”.
Caasimadaha waaweyn ee dunida ayaa la saadaalinayaa inay soo galaan ama ku kordhaan dad cusub oo tiradoodu gaadhayso 380 Milion oo ruux mudada shanta sanadood ah ee soo socota, taa darteedna waxaa loo baahanayaa hanaan cusub oo rakaabinta dadka iyo xamuulka badeecadahooda ah, iyadoo sidoo kalena ay lama huraan tahay in la daraasadeeyo oo laga shaqeeyo qaababkii ugu fududaa ee loo gaadhi karayey suuqyada noocaas ah.
Dekeda lamu iyo Mashruuca isku xidhka Lamu-South Sudan-Ethiopia Corridor ayaa lagu magacaabay mid ka mid ah mashaariicda caalamiga ah ee dhanka kaabayaasha, kaas oo dhalin doona kooxo ganacsi oo cusub ah iyo fursado badan oo dhanka horumarinta ah.
mashruucani waxa uu ka kooban yahay dhismaha deked balaadhan oo illaa sodon markab ay hal mar ku soo wada xidhan karaan iyo xarumo kale oo sifaynta batroolka ah, isagoo Magaalada Lamu ku xidhiidhin doona Magaalada Nairobi, kana talaabaya xuduudaha Itoobiya iyo K/Sudan iyado la adeegsan doono tareenada iyo gawaadhida, dhulkana la marin doono beebabka shidaalka qaada.
.Mashruucan kale ee caalamiga ah ee kan u dhigmayaana waa mashruuca jid tareenka dheereeya ee dalka shiinuhu ku doonayo inuu xagga dhulka kaga xidhmo Qaaradda yurub, jidkaa oo sii dhexmaraya Dalalka ruushka iyo Iran ilaa uu halkaa ka gaadho Wadanka turkiga oo ka trsan qaaradda yurub.
Dalka shiinaha ayaa sidoo kale waxa uu Dalka Kenya ka wadaa mashruuca Standard Gauge Railway kaas oo isku xidhi doona Magaalooyinka mombasa iyo nairobi. isagoo sanadkan badhtamihiisiina dhammaystiray mashruucii jid tareenka casriga ah ee Dalka itoobiya ku xidhay Dekeda badda cas ee Jabuuti.halka shiinuhu uu sidoo kale qayb ka yahay heshiiska Somaliland iyo itoobiya ee mashruuca Berbera Corridor oo dekeda berbera ku xidhi doona dalka itoobiya.
Dhanka kale warbixinta Global bussiness waxay sheegaysaa in wadanka Kenya uu horumarin balaadhan ka sameeyey dhanka wax soo saarka beeraha, kaasoo qiyaas weyn ka ah totalka guud ee wax soo saarka gudaha ee wadankaasi, Gross Domestic Production (GDP), iyadoo dalku kor u qaaday dhinacyada adeegyada iyo waxsoo saarka wershadaha.
Dalka kenya ayaa noqday wadan ay si xawli leh u kobcayso aqoonta iyo adeegsiga Information Technology (IT), iyadoo wax soo saarka wershadaha iyo shirkadaha isgaadhsiintu uu 30% kor u kacay mudadii u dhexaysay 2011 ilaa 2014, halka ay isla mudadaa wax soo saarka dhinacyada maaliyada iyo caymiska sameeyeen kor u kac gaadhaya 20%.
Warbixintii ay sanadka 2016 soo saartay hay’ada lacagta adduunka International Monetary Fund(IMF) ayaa tilmaantay in wadanka kenya wax soo saarkiisa gudaha ee sanadlaha ahi uu 2016 sameeyey koboc gaadhaya 7.2%, halka uu dalka Nigeria sameeyey 5%, Koonfur Afrikana 2.1%.
« Warbixinta Ka HoreysayQiso Gaaban Oo Cajiib Ah Iyo Feylasuufkii Fashiliyay Tuugadii Qiyaantay Boqorka..	Warbixinta Xigto »Jilciso Dabiici Ah Oo Tintaada Ka Dhigeyso Mid Dhaldhalaal Iyo Qurux Badan..	HADAAD ISTICMAASHO FACEBOOK HALKAAN KU REEB FIKIRKAAGA	Leave a Reply Cancel reply